တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာ့သားကောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ(လေးထောင့်ကန်)တည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေများအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၁၇၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာ့သားကောငျးစဈမှုထမျးဟောငျးအိမျရာ(လေးထောငျ့ကနျ) တညျဆောကျနမှေုအခွအေနမြေားအားသှားရောကျကွညျ့ရှုစဈဆေး
နပွေညျတျော၊ မတျ – ၁၇
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA တို့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၈ Admin 0